Warshadaha Maxwell Warshadaha ayaa soo saaray qalab dhexdhexaadin dawooyin ah | Maxwell
Warshadaha Maxwell Warshadaha ayaa soo saaray qalab dhexdhexaadin dawooyin ah
Daawada waa sheyga ama diyaarinta kahortaga, daaweynta ama ogaanshaha cudurka dadka iyo xoolaha. Iyada oo ku saleysan isha, daawada waxaa loo qaybin karaa daawooyinka dabiiciga ah iyo kuwa isku-darka. Daawada sidoo kale waxay ka hortagi kartaa cudurka, daaweynta cudurrada, yareynta xanuunka, hagaajinta caafimaadka, kor u qaadista awooda jirka ee lagula dagaallamo cudurka ama ka caawinta ogaanshaha cudurka.
Warshadaha Maxwell waxay fiiro gaar ah siisaa cilmibaadhista iyo horumarka amniga iyo caafimaadka ee dhexdhexaadinta, waxay bixiyaan qalab xirfad sare leh iyo qandaraas qandaraas oo ku wajahan warshadaha dhexdhexaadinta dawooyinka, alaabada ayaa u hoggaansan shuruudaha GMP. Noocyada waxaa ka mid ah nooc kasta oo daawo dhexdhexaad ah sida aromatic
Warshadaha Maxwell waxay leedahay taariikh dheer si ay u soosaarto qalab dhex-dhexaad ah oo dawooyin ah isla markaana waxay ku wareejisay qalabkii iyo adeegyadii qandaraas-siinta qalabyo badan oo caan ah iyo; shirkado caan ah oo dhexdhexaadiya shirkadaha wax soosaarka. Ma nihin oo keliya qalabka wax soo saarka, laakiin waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo soo saarista warshad dhan, naqshadeynta injineernimada, cusboonaysiinta warshadda iyo ballaarinta, la-talinta maareynta mashruuca, naqshada mashruuca iwm.;
Qalabka iyo Waxqabadka Horudhaca:
Blender: Si balaaran ayaa loogu isticmaalaa isku qasidda budada iyo budada, budada lagu qaso qadar yar oo dareere ah. Kusoo biirista dareeraha, Warsidaha Maxwell waxay u sameysay qaab madaxbannaan cabbirid cabbir leh si loo wanaajiyo isku dhafka tayada iyo isku-duubnaanta; Isku-darka wuxuu leeyahay tilmaamo dhammaystiran oo u dhexeysa nooca shaybaarka illaa nooca wax soo saarka, nooca toosan ama nooca toosan ee xulashooyinkaaga. Waxaad dooran kartaa mashiinka ugu habboon iyada oo la raacayo hannaanka wax soo saarka iyo astaamaha sheyga (cufnaanta, mesh, iwm.).
Qalabka Soo Bixinta iyo Quudinta: waxay ka kooban tahay bac yar iyo boorso ton ah oo qalabka wax lagu kala bixin karo ah waxaana loo kala saari karaa nooc semi-otomatik ah iyo mid otomaatig ah.
Keeniyaha: waxaa ku jira gudbinta oof-wareenka (cadaadiska togan iyo cadaadiska taban, wejiga cufnaanta, wejiga lagu miro) iyo weelka farsamada gacanta (daboolka, baaldi, silsiladda tuubbada iyo suunka). ;
Mashiinka Baakadaha: waxaa ku jira bacda waalka iyo mashiinka wax lagu rito ee furan. Iyada oo ku saleysan xaddiga buuxinta, ayaa loo qaybiyaa 5kg, illaa 50 kg iyo baakad bac ah. ;
Xirsi-sarreeya Emulsifier:kala-baxa, isku-darka, emulsification, dib-u-habeyn lagu daro waxyaabaha cuntada lagu daro, iyadoo la raacayo foomka, ayaa loo qaybin karaa laba nooc: nooc nooc ah iyo nooc gudaha ah; marka loo eego habka waxsoosaarka, waxaa loo qaybin karaa qulqulka qulqulka degdegga ah, emulsifier-ka-buufin leh, emulsifier xiir sareeya, emulsifier-adag isku-dhaf ah, iwm.; Naqshado kaladuwan sida vacuum iyo kululaynta ayaa la heli karaa si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee hawsha.
Nidaamka Bixinta Powder and Liquid: conveying budada (cadaadiska togan, cadaadiska taban, wejiga cufnaanta, wejiga lagu miro), weelka farsamada gacanta (wareegga, suumanka, baaldi, iwm); dareeraha wanaagsan ee dareeraha ah iyo gudbinta cadaadiska xun.
Powder, Nidaamka Dheecaanka Liquid: oo ay ku jiraan "habka kordhinta", "Qaabka dhimista", "Qaabka mugga" iyo qaababka kale ee wax lagu dubo.